Dhiphinni Sammuu gara of ajjeesuutti geessuu mala
Fulbaana 24, 2013
WASHINGTON, DC — Steve Iselin waggoota digdamaaf humna galaanaa keessa tajajaajilan. Waggoota kudha sadii dura kan gadamoojja’an si’a ta’u hojii ka biroo barbaaduu eegalaniiru. Yeroo sana egaa kan abdii kutatan jedha gabaasa Faith lapidus.
Guyyaa guyyaatti sodaatu natti dhaga’ama. Sammuu kootti kan dhufu jechi ka biroon dhiphachuu dha. Waanan yeroo kaan hojjechuu fedhu tokko iyyuu hojjechuu hin barbaadu. Namoota arguufis fedha tokko iyyuu hin qabu. Dalagaa argadheera, garuu torban tokko booda hojjechuu hin danda’u jedhee ofitti himuu dhaan hojii koon dhaabe jedhan.
Ofitti amantaa hin qabu. Waantin hojjedhu martinuu natti ulfaata. Murtii ani guyyaa guyyaatti irra ga’u waan ani uffadhuu fi
Iselin dhiphina sammuun rakkatu. dhaabbata “American foundation for sucide Prevention” jedhuuf kan of ajjeesuu ittisuu irratti hojjetuuf hoogganaa kan ta’an Bob Gebbia dhiphinni sammuu gadduu ykn guyyaa gaarii utuu hin qabaatin hafuu irraa adda jedhu.
US keessaa waggaa waggaatti uummata miliyoona 20 ta’antu dhiphina sammuuf mana yaalaa dhaqu. Dhipinni sammuu kun sanyii irra ykn rakkoo sammuu keessatti uumamuu akkasumas naannootti waan uumamuun dhufuu danda’a jedhan.